Ndimbonile - Xhosa - Inglés Traducción y ejemplos
Usted buscó: ndimbonile (Xhosa - Inglés)
Yabona indoda ethile, yamxelela uYowabhi, yathi, Khangela, ndimbonile uAbhisalom exhomekile emterebhintini.
Wangqina uYohane, esithi, Ndimbonile uMoya, esihla njengehobe, ephuma ezulwini, wahlala phezu kwakhe.
Walibiza igama likaYehova, obethetha naye, wathi, UnguThixo ozibonakalisayo. Ngokuba wathi, Ndisabona na nalapha, emveni kokuba ndimbonile?
Wathi yena, Ngako oko, live ilizwi likaYehova: Ndimbonile uYehova ehleli etroneni yakhe, umi wonke umkhosi wasemazulwini ngakuye, ngasekunene kwakhe nangasekhohlo kwakhe;
zwischenböden (Alemán>Inglés)vagyonkezelők (Húngaro>Inglés)nagkamali ako ng pagsusulat (Inglés>Tagalo)κάλυμα (Griego>Inglés)murettekitava (Estonio>Japonés)job tonight (Indonesio>Inglés)impatto antropico (Italiano>Inglés)социјалдемократска (Macedonio>Inglés)sanaysay tungkol sa wika (Tagalo>Inglés)maana ya mbunge kwa kiingereza (Inglés>Suajili)planche de surf (Francés>Inglés)contoh karangan bertajuk kepentingan kebersihan (Malayo>Árabe)zersplitterter (Alemán>Polaco)per quanto riguarda gli immobili strumentali (Italiano>Inglés)samlegodstransport (Danés>Esloveno)sadness flies away on the wings of time (Inglés>Vietnamita)дълговечна (Búlgaro>Hindi)carencias afectivas (Español>Danés)manan mananichu (Quechua>Español)rm (Inglés>Rumano)důstojníkům (Checo>Inglés)bf com hide (Hindi>Inglés)bokfort (Sueco>Inglés)proto (Portugués>Inglés)